musha Europe Vatambi Vanotamba Roger Federer Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Yedu Roger Federer Biography inokuudza Chokwadi pamusoro peNyaya yake Yehucheche, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Wife (Miroslava Vavrinec), Lifestyle, Net Kukosha uye Hupenyu hwePamoyo.
Muchidimbu, tinokupai Nhoroondo Yese yeTennis Genius uyo anozivikanwa kwazvo nezita rezita rezita "MaSwiss Maestro".
Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri / mamiriro ezvinhu uye vazhinji OFF uye ON-Screen zvishoma-kuzivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wese anoziva nezvekutonga kwake kwekutonga muTennis. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Roger Federer's Biography, iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwe ado, ngatitangei.
Roger Federer Yemwana Nhau - Hupenyu hwepakutanga uye Mhuri kumashure:
Mudiki Roger Federer (akafananidzirwa pazasi) akazvarwa pazuva re8th raAugust 1981 muBasel, Switzerland.
Baba vake, Robert Federer, vakanga vari Swiss avo vakashanda kune imwe kambani yeMishonga, asi amai vake, Lynette Federer, vaiva muSouth Africa avo vakashandawo kune imwe kambani yeMishonga panguva yekuzvarwa kwake.
Kukurira muguta reBasel, rinova yunivhesiti yekare yeSwitzerland, mamiziyamu akawanda pamwe neTheatre Basel ine mukurumbira, Federer mudiki aive sevana vazhinji munharaunda yake, aitarisirwa kuita zvedzidzo kana zvehunyanzvi.
Iye, zvakadaro, akateedzera kufarira kwevamwe mune izvo zvaaisatarisirwa kutarisa nekuremekedza kukuru; Tennis.
Kunyangwe Tennis yaive mutambo uyo mhuri yake yainakidzwa nekutamba, zvainyanya kutaridzirwa sechiitiko chemafaro nevabereki vake uye imwe hanzvadzi yakura yaive nezvimwe zvido.
Zvakadaro, mhuri yake ine mari yakawanda yakanzwisisa kuti kuda kwaFederer kumutambo uyu kwaive kwakavakirwa uye, pamwe nehunyanzvi hwekuvimbisa hwaakaratidza panguva yemitambo yemhuri, zvaizomubatsira kuzvivezera niche mune ramangwana.
Roger Federer Untold Biography Chokwadi - Nyaya Dzeshungu:
Federer aingova nemakore 8 paakawana kupinda mujunior tennis chirongwa muBassel.
Akanga akanyura mumutambo uyu zvokuti maitiro ake emanzwiro panguva ipi zvayo yezuva rimwe nerimwe raipfuura raiva chiratidzo chekufamba kwaakaita mu tennis uye zvinonakidza kuti chifananidzo chake chehuduku, Boris Becker, chakaitwa sei mumutambo wake!
Iyo inotevera Tennis Genius yakambochema kusvika pakuzadza poindi yehudiki gamba rake Becker paakakundwa naStefan Edberg mune yekupedzisira yeWimbledon ya1988. Maitiro akacherechedzwa naFederer, Tennis hwaive hupenyu, uye kuhwina kwaireva zvekudya.
Nekuda kweizvozvo, aigara achipenga nehasha pese paanorova mbeveve nekukanda raki rake kurwisa fenzi achiratidza kuzvidzora.
Kune avo, ivo vabereki vake vaigona kungotarisa nekutya kuti mwanakomana wavo ane rudo akatora sei Tennis kubva pane inonakidza zviitiko zvemhuri kuenda kune ega uye nehasha manzwiro manzwiro.
Kubudirira kwakavatungamira kuti vachengetedze masevhisi emutambi weAustralia tenesi Peter Carter kuti 'agadzire' mwanakomana wavo.
Roger Federer Biography Chokwadi - Basa Rekuvaka:
Yaiva Peter Carter uyo akabatsira Federer kubatanidza zvidimbu zvisipo (strategy, psychology uye ruremekedzo) pasina izvo kutamba Tennis kwaigona kuramba kuchiita basa remuviri uye mupfungwa.
Vachiona kukosha kwakanaka kwekudzidzisa pane yavo yemwanakomana uye yepamoyo maitiro, vabereki vaFederer vakamutendera kuti apedze nguva iri nani yenguva yake pasi pekudzidziswa naPeter Carter.
Kwapera nguva yekudzidzira kuedza kwakamuona achibva kumba achiri muduku (13 yemakore emakore) kuitira chinangwa chokugadzirisa unyanzvi hwaakadzidza mune dzimwe nzvimbo dzekudzidzisa zvivako kusanganisira Switzerland yenyika yekudzidzisa nzvimbo muEcublens uye nzvimbo itsva yekudzidzira muBiel uko Federer akasangana naye huri hudiki huchikoro Mudzidzisi Peter Lundgren.
Roger Federer Biography - Kumuka Mukurumbira:
Kukwana kwakatsvakwa naFederer kwakaitwa kuti kukwanisike naPeter Lundgren uyo akadzidzisa Federer kupfura kwakasarudzika, kupwanya simba-simba, tsoka dzakanaka uye nehunyanzvi hunyanzvi hunhu hwehunhu hwake hwekutamba mune ino nguva.
Nokudaro, akaendesa unyanzvi hwakakwana pakuwana hutsika hweTX ​​#1 pasi sevechiri kuyaruka, akatonga Wimbledon vaduku vasina uye mazita echipiri uye akazosvika kumagumo ekukwevera kwekupedzisira kuU.S. Open.
Tabbed semurairidzi weFederer, Peter Lundgren akashanda kuti ave nechokwadi chekuti basa raFederer rakaenda kwese kwese asi kukwira, chiitiko chakaona Federer achibata mazita asingaverengeki, akagara pamusoro pezvikwiriso, akaisa marekodhi, uye akatonga Tennis. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Miroslava Vavrinec ndiani? Mudzimai waRoger Federer:
Roger Federer, pasinei nerudo rwake uye kuzvipira kumutambo wetennis, akasangana nemudzimai wake Miroslava Vavrinec muna 2000, panguva yeSydney Olympics, apo vose vakanga vachimiririra Switzerland pamitambo.
Zvakadaro, Mirka, sekudaidzwa kwaanoita akasiya kutamba Tennis muna 2002 nekuda kwekuramba achikuvara tsoka ndokuzova murume wake kuve maneja wePR uyezve munhu anojaira pamitambo yake nekuhwina, hongu.
Mushure memazana emakore e9 ekudanana, vakaroora vakaroorana musi waApril 11, 2009, paWenkenhof Villa muBasel, guta rokumusha kwake.
Kubatana kwavo kunokomborerwa nemaviri mapatya. Muna 2009, vakanga vaberekera vakomana vaviri vakafanana, Myla Rose uye Charlene Riva.
Mune 2014, vakakomborerwa nechechi yevakomana vakadaro, Leo naLennart.
Roger Federer Hupenyu Hwemhuri:
Roger Federer akaberekerwa mumhuri yakarongeka, gara shure apo tinokuendesa iwe mashoko emhuri yake.
Robert Federer, Baba ve tennis nyeredzi, muSwitzerland-German. Anobva kuBerneck muCanton yeSt. Gallen.
Akasangana naLynette, mudzimai wake muKempton Park, South Africa, ndokumuroora gore rimwe chete ravakasangana mu1973. Mushure mekuroora, vese vakatamira kuSwitzerland.
Lynette Federer, Amai venyanzvi yeTennis, munhu wekuSouth Africa. Iye ndewerudzi rweAfricaan anobva kuKempton Park, Gauteng, muSouth Africa, uye akakurira muJohannesburg.
Aive mutambi-wenguva imwe chete aive achishingairira muzvikoro zvetsika uye zviitiko zvemumunda, akatamba netball, hockey yemunda. tenesi negorofu.
Kuratidzwa pasi apa mufananidzo weFederer nevabereki vake vane rudo.
Hanzvadzi yaRoger Federer mukuru uye munin'ina chete, Diana, akazvarwa muna 1979 muBasel-Stadt, Switzerland. Akazvarawo mapatya - mukomana mumwe nemusikana mumwe.
Mukurangarira KwaPeter Carter:
Roger Federer anga asina kugara ari pamusoro pemutambo wake maererano nekukura uye mutambo wakanakisa kusvika pakufa kwemurairidzi wake wekutanga, Peter Carter.
Carter akafa mutsaona yemumugwagwa ari paSafari kuSouth Africa. Rufu rwake haruna kuenda zvakanaka naFederer, uyo akanga ari pedyo naCarter kubvira paaiva nemakore mapfumbamwe.
Mushure memavhiki ekuchema kuchema, Federer akagadzirisa kuti achakudza kukurangarira kwomudzidzisi wake akafa kuburikidza nepamusoro pemitambo yake nguva dzose.
Nekukurumidza kumberi kwazvino, zviri pachena kuti Federer akachengeta chisarudzo chake chekukudza murairidzi wake wekupedzisira nekuda kwezita rake risingaverengeke rekukunda uye zvinyorwa zvitsva.
Kukwikwidzana naRafael Nadal:
Anotaura nezve kukwikwidzana pakati pevatambi vetenisi vane hunyanzvi vakatonga tenesi kweanoda kusvika makumi maviri emakore anga ari munzvimbo yeruzhinji kwechinguva ikozvino.
Ivo vaviri parizvino vane zvigaro zvepamusoro muATP Rankings uye ivo vanoonekwawo zvakanyanya sevatambi vaviri vakuru venguva dzese.
IFederer- Nharo yaNadal yakafanana neyeye Messi - Ronaldo kukwikwidzana mumutambo weBhora, sezvo vese vatambi vanga vari mudare reruzhinji kuona kuti ndiani mukuru. Kukwikwidzana kwemutambi weTennis kwakatsanangurwa nevakawanda seakakura kwazvo munhoroondo yemutambo weTennis.
Ivo vaviri vane 38 Grand slam Titles pakati pavo, asi Nadal agara achikunda musoro-ku-musoro rekodhi 23-15 kunyangwe aine matatu mashoma maMajors.
Iyo 2017 Shanghai Masters ndiyo yekupedzisira yekupedzisira apo vese vatambi vakasangana. Nadal akakunda 9 pamisangano yavo gumi nemaviri mumadhorobha.
Kunyangwe seSpanish-Nadal ari kuyedza kuenzanisa rekodhi yaFederer, anotaura nezvemanzwiro ake echokwadi kumukwikwidzi wake mukuru mune zvakanyorwa Strokes of Genius.
"Hwakagara huri hukama hwakanaka, kuremekedzana kukuru, takagovana nguva dzakakosha tese tiri vaviri uye taigara tichizviita nenzira yakanaka. Chinhu chandinodada nacho. ”
Roger Federer Chokwadi:
Federer aigara achitaura pachena kuti haazosimbisi mutambo we tennis pavana vake.
"Ini handizive kana vana vachazombotamba tenisi pachidanho chakadai. Asi ndinofunga kumwana chero mumwe zvake zvakakosha kuti vafarire zvavari kuita, chero mutambo upi. ”
Pazera re16, aive nesarudzo yekuita pakati pemitambo uye dzidzo, akaenda kunotamba
Aive nemombe yainzi Juliette yaakapiwa kwaari mushure mokunge aine zita rake rekutanga reWimbledon mu2003.
Zvose kuburikidza nekutamba kwake basa, haana kumbobvisa mari kubva pamutambo, nguva dzose achizadza, kana kukunda kana kurasikirwa.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinoonga nekuverenga Roger Federer yedu Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!